Artha Sansar News - यी कम्पनीको ३ करोड कित्ता हकप्रद भर्नु भयो ?
यी कम्पनीको ३ करोड कित्ता हकप्रद भर्नु भयो ? बजार मूल्य भन्दा सस्तोमा सेयर किन्ने अबसर नगुमाउनुस्
काठमाडौँ – के तपाईले विभिन्न सेयर किनबेच गर्नु हुन्छ ? तपाईको माछापुच्छ्रे बैंक, नागबेली लघुवित्त, वेस्टर्न डेभलपमेन्ट, सेवका विकास, नमस्ते फाइनान्स, र सगरमाथा फाइनान्सको सेयर छ ? ती संस्थाले अहिले हकप्रद वितरण गरिरहेका छन् । कुन कम्पनीले कहिलेसम्म हकप्रद दिइरहेको छ भन्ने थाहा पाउनु आवश्यक छ । बजार मूूल्यभन्दा सस्तोमा किन्न पाइने सेयर भर्न किन छाड्नु ?
माछापुछ्रे बैंक लिमिटेड
माछापुछ्रे बैंक लिमिटेडले गत मंसिर २९ गतेदेखि ५० प्रतिशत अर्थात २ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । बैंकले एक सय रुपैयाँ अंकित दरमा एक अर्ब ९३ करोड २२ हजार ७ सय रुपैयाँ बराबरको एक करोड ९३ लाख २२ हजार ७ सय कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । कात्तिक ११ गते कायम बैंकका सेयरधनीले मंसिर पुस २४ गते अर्थात आइतबारसम्म हकप्रद भर्न सक्नेछन् । बैंकको हकप्रदमा पुष २४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
नागबेली लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड
नागबेली लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेडले गत मंसिर २० गतेदेखि ५० प्रतिशत अर्थात दुई बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । बैंकले १ सय रुपैयाँ अंकित दरका १ लाख २५ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । हकप्रद निष्काशन पुस २४ गतेसम्म भर्न सकिने छ ।
वेष्टर्न डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड
वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको शतप्रतिशत अर्थात एक बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । बैंकले गत मंसिर २२ गतेदेखि १ सय रुपैयाँ अंकित दरका १५ लाख ६९ हजार ६ सय कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ । बैंकको हकप्रद निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड छ । पुस २६ गतेसम्म निष्काशन खुला रहने हकप्रद सेयरका लागि गत कात्तिक ३० गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले आवेदन दिन सक्नेछ ।
सेवा विकास बैंक लिमिटेड
सेवा विकास बैंक लिमिटेडले १२० प्रतिशत अर्थात १ बराबर १.२ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । बैंकले गत मंसिर २३ गतेदेखि १ सय रुपैयाँ अंकित दरका ५१ लाख ६ हजार ६ सय ६२ कित्ता कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । उक्त हकप्रदका लागि पुस २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्तापुँजी ९३ करोड ६२ लाख २१ हजार ४ सय रुपैयाँ पुग्नेछ ।
नमस्ते वित्तीय संस्था लिमिटेड
नमस्ते वित्तीय संस्था लिमिटेडको शतप्रतिशत अर्थात एक बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद सेयर पुस ८ गतेदेखि निष्काशन गरेको छ । कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित दरमा तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरका तीन लाख ७५ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । मंसिर २३ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्रै उक्त हकप्रद भर्न पाउनेछन् । उक्त हकप्रद निष्काशन माघ १३ गतेसम्म खुला रहने कम्पनीले जनाएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पँजी ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद वितरणपश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ ।
सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेडले ८० प्रतिशत अर्थात १० बराबर ८ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित दरमा २९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको २९ लाख ५४ हजार ३९० कित्ता सेयर निष्काशन गरेको हो । उक्त हकप्रदका लागि माघ १७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । मंसिर २३ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्रै उक्त हकप्रद भर्न पाउनेछन् । सगरमाथा फाइनान्सको चुक्ता पूँजी ३६ करोड ९२ लाख रुपैया छ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ ।
बिग सेलमा उपभोक्ताको भिड